Danjire Cali Americo oo Safaarada Soomaaliya ee Kenya ku Qaabilay Dhigiisa Dalka Angola “Sawirro” – Radio Muqdisho
Danjire Cali Americo oo Safaarada Soomaaliya ee Kenya ku Qaabilay Dhigiisa Dalka Angola “Sawirro”
Safiirka cusub oo ay dowlada Angola u soo magacawday dalkani Kenya Amb, Virgilio Marques De Faria ayaa maanta booqday safaarada ay dowlada Soomaaliya ku leedahay dalkani Kenya,waxaana si heer sare ah ugu soo dhaweeyey dhigiisa dalkani Kenya u fadhiya dowlada soomaaliya mudane Amb, Maxamed Cali Nuur Americo .
Amb, Virgilo Marques ayaa sheegay in uu mahad naq balaaran uga wado dowlada Angola Dowlada soomaaliya, isagoo sheegay in aanay marnaba hilmaami doonin Dowlada Angola taageeradii balaarneyd oo ay u fidisay dowladii Soomaaliya ee uu hogaaminayey allaha u naxariistee Jeneral Maxamed Siyaad barre ay siisay dowlada Angola xiligii ay xornimada raadineysay.
Danjiraha dowlada Angola ee dalkani Kenya ayaa intaasi ku daray inay taasi Badalkeeda haatan diyaar u tahay dowlada Angola inay gacan siiso dowlada Soomaaliya maadaama uu dalka soomaaliya haatan ka soo kabanyo burbur baahsan oo saameeyey dhamaan Adeegyadii aasaasiga u ahaa jiritaanka nolosha aadamaha.
Danjiraha dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Amb,Maxamed Cali Nuur ayaa danjiraha dowlada Angola uga mahadceliyey booqashada uu ku yimid Safaarada Soomaaliya ee dalkani Kenya,isagoo dhanka kalana u gudbiyey danjiraha cabashooyin ku aadan wax ka qabashada dadka Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka Angola.
Amb Cali Americo ayaa sidoo kale danjiraha Angola u gudbiyay cabashooyin ku aadan dhibaatooyin isugu jiro dil iyo dhac oo loo geysto dadka Soomaaliyeed ee ka ganacsada dalka Angola.
Safiirka cusub oo ay dowalda Angola u soo magacawday dalkani Kenya Virgilio Marques De Faria ayaa balan qaaday in uu wax ka qaban doono sii deynta dadkaasi Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xabsiyada dalka Angola.
Sawir qaade:-C/raxmaan Cumar Cabdi ( Soomaali)